Nkịta siri ike anaghị agba egwu. Ezigbo ndụ bit nke Arturo Pérez-Reverte | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nkịta siri ike anaghị agba egwu. Nnukwu nkịta dị ndụ nke Arturo Pérez-Reverte
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Novela, Black akwụkwọ
Foto nke Arturo Pérez-Reverte sere. EFE Agency
Maka ezigbo onye na - agụ akwụkwọ ọ nweghị ihe dịka ịkọ cha cha na ha ruru mkpụrụ obi ma wepu afọ. Na m mechaala rie nnukwu nri Macbeth site Jo Nesbø na ụbọchị isii na-elopịa a phenomenal Nkịta siri ike anaghị agba egwu de Arturo Perez-Reverte n'ime abụọ. Tearsbọchị abụọ nke anya mmiri ma maka ọchị na ọchị ma maka imikpubi nke obi.
Bọchị abụọ atụgharị n'ime nkịta, na nke m, a Anụọhịa. Twobọchị abụọ nke ọcha mmetụta uche na anyị niile nwere ma ọ bụ na anyị na mmadụ biri otu ga-aghọta karịa okwu ndị a na akwụkwọ ahụ. Anyị niile ndị mara ka ha ga - esi dịrị, kpọpụta gị wee mee anụmanụ ndị ahụ. Aga m achikota nyocha na ahiriokwu a. Don Arturo, kwụsị Cosgha, Evas na akụkọ ndị ọzọ na soro Negro a na ndi enyi ya na ndi iro ya. Maka m, ha bụ ndị a na-agaghị echefu echefu.
Edeela m ọtụtụ ederede na nkịta. Isi iyi nke mmụọ nsọ, odide edemede, oru ngo elekọta mmadụ na ha gụnyere… Ya mere, mgbe m hụrụ akwụkwọ ọhụrụ a nke otu n'ime ndị edemede kachasị amasị m, enweghị m obi abụọ ọ bụla na ọ ga-amasị m. Ya mere ọ dịla.
A Arturo Perez-Reverte M na-eso ya kemgbe ọtụtụ afọ. Ihe masịrị m Alatriste, Enwere m obi ụtọ Onyunyo ugo, M mechara merie Akwụkwọ ozi dị n'elu ya onwe-ya we me ọchi nnù abua na ọgu iri Jodía Pavia ma ọ bụ ya Cape Trafalgar. O gwudokwala m Na nnọchibido ahụ ma o mechara ka m kwere ya usoro ya Cgha, ma m na-eme omume nke ha Akwụkwọ edemede enwetala m ihe karịrị otu mop maka ihe kpatara ha. Iji nnukwu nsọpụrụ m ga-ekwu. Ma abia n’ihe banyere mutt anyi kwetarụ kpam kpam.
Enwere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọbá akwụkwọ ya dum, ọ bụ ezie na enwere m aha ole na ole ịgụ. Ọzọkwa akwụkwọ mkpokọta nke isiokwu ya. Nke ikpeazu bu Nkịta na ụmụ nkịta. Ya mere, mgbe m hụrụ akụkọ a, egbughị m oge ọ bụla, dịkwa ka m na-ekwu, Obi tọrọ m ụtọ.
1 Bọchị 30 na Black
2 Enyi, ikpe ziri ezi, obi ọjọọ, ịhụnanya na iguzosi ike n'ihe
3 Ndị nkịta ndị uwe ojii, neo-Nazis, posh, fatịlaịza ...
4 «More mili karịa nkịta Gladiator
5 Abụ m spartacus
6 Ya mere ...
Bọchị 30 na Black
Raara onwe ya nye nkịta o nwere, Pérez-Reverte na-ekwu na ọ dere akwụkwọ a n’ime otu ọnwa. Ekwenyere m ya n'ihi na ọ dakwara m. Mgbe ụfọdụ Akụkọ na-abịakwute anyị na mberede ma ọ bụ na ọ dịla nwa oge ma anyị maara na anyị ga-ede ha. Ha na-apụkwa naanị ha, n’ebughị ụzọ chee echiche. Maka na ha metụrụ anyị aka n'ụzọ pụrụ iche naanị naanị anyị ga-ewepụ ha. Na mgbakwunye, anyị maara na ha ga-abara anyị uru. Nke a bụ ikpe. Akụkọ dị mkpirikpi na gburugburu.
Enyi, ikpe ziri ezi, obi ọjọọ, ịhụnanya na iguzosi ike n'ihe
The Cervantine nkebi ahịrịokwu nke Colloquium nke nkịta Tupu ịmalite ọ na-ekwu ya niile. Mgbe ahụ Pérez-Reverte ghọrọ Negro, nkịta mongrel, obe n'etiti Spanish mastiff na otu ndị Brazil, onye na-agwa anyị okwu na onye mbu ji asụsụ doggy ya (mechie imi gị, nye m paw ...). Ma anyị maara akụkọ ihe mere eme ya mgbe anyị nọ n'ime ya Obodo Margot, Anụọhịa Argentina.
Nkịta na-alụ ọgụ n'okpuru ala, Negro enweworị afọ asatọ na ihe anyị nwere ekele ma nwee mmetụta kachasị mma bụ nke ahụ ike gwụrụ na ndụ siri ike enwewokwa ike iwe ya. Ma na-akwado ụkpụrụ ya na iguzosi ike n'ihe ya. Agụla m na ọ bụ Alatriste nwere ụkwụ anọ. Ikekwe. Aghọtala m na agwa ahụ na-adọta m nke ọma nwere ụkwụ abụọ, anọ ma ọ bụ asatọ.
Isi ihe bụ na ndị enyi abụọ efuola, Teo na Boris el Guapo, na ndị ahịa na-ere ahịa mgbe niile na Trough, n'etiti ha onye ọkà ihe ọmụma aha ya bụ aha ya Agilulf, ha na-ekwu banyere akara aka na-ejighị n'aka ha nwere ike ichewo ihu. Teo, na mgbakwunye, bụ ezigbo enyi Negro na agbanyeghị na ọnọdụ dị iche iche kewara ha, gụnyere a ịhụnanya triangle, nke Black anya na ọrụ nke na-achọ ha. Ọ nwere nnukwu echiche nke ihe gaara abụ nke ha ma na-ama jijiji na-eche maka ya.
Ndị nkịta ndị uwe ojii, neo-Nazis, posh, fatịlaịza ...
La agwa agwa Ihe ndị Negro na-ezute dị iche iche, dịka akụkọ ha. Margot Site na ụda olu ya nke Argentine, ọmarịcha onye setịpụrụ Irish Dido, akụkụ nke triangle mmetụta, nzuzu na ihe ịtụnanya Mortimer (ihe ọchị dachshund), onye na-eduzi dike anyị gaa egwu Cañada Negra, ma ọ bụ Helmut na ndị ọchụnta ego ya (Doberman neo-Nazis enweghị ọgụgụ isi). Ha dịkwa Snifa na Fido, nkịta ndị uwe ojii.
Kwụpụta Tequila, onye ndu xoloitzcuintle nke Mexico nke nkịta kachasị dị egwu «cartel» bụ onye ha debere nke ọma, ya na onye ndụmọdụ, Rufus, nke bụ greyhound nke Spanish nke akụkọ ihe mere eme ya na ihe oyiyi m nwere dị ka ihe mwute na ncheta na-awụ akpata oyi mgbe m bụ nwata.
Ma e nwere ndị dara ogbenye wuru ma ọ bụ hapụrụ nke na-ejedebe n'aka anụ ọhịa ahụ nwere ụkwụ abụọ nke kpọchiri ha na ngịga ma jiri ha dịka nkịta na-alụ ọgụ ma ọ bụ nza ha. Akụkọ banyere chocolate labrador aha ya bụ Tomás na onye ntà Cuckoo, onye ụjọ mmanya, maa jijiji n’ime mkpụrụ obi.
Iji mee ka ihe kawanye njọ, anyị dị afọ iri na otu obere mmanya na-egbu mmanya, nwee obi ike ma mara ihe dịka akpọrọ ya Chiqui. Ma ị ka nwere nke anyị Cuckoo, obe Pekingese, onye dị afọ iri na isii. Ha abụọ bụ Manchego mutts n'okporo ámá ndị lanarịrị ịhapụ na mmekpa ahụ, mana ndị chọrọ ha ruo mgbe ha chọtara anyị. Yabụ, were, Maazị Reverte, gụọ otu isiakwụkwọ ahụ Duel na Barranca.
«More mili karịa nkịta nke Gladiator«
N'ihi na ee, enwere anya mmiri, mana Ha bụkwa ihe ọchị, ọchị a na-apụghị izere ezere nke ahụ na-ewe nchapu ụgbọ oloko ọ bụla ị na-agụ. N'ihi na ọ gaghị ekwe omume ịkwụsị ịchị ọchị drama ahụ nke Boris the Handsome na isi 8. Site na akụkọ ifo. Ma ọ bụ na nke ahụ akụkụ ikpeazụ ebe nkebi okwu a dị n’elu na-akọwa nke ikpeazụ nke ndị iro Negro, a mara mma (Onye ọzụzụ atụrụ French). Ekwesịrị m ịkọwa mkparịta ụka ịkụ ọkpọ a n'etiti ha.
"Pobọchị pog muegto, Spanish peggo," toro gabacho, nwayọ ma o doro anya.
Azaghachiri m, sị, "first ga-ebu ụzọ mụọ piom m." Iberi aha.
O lee anya na mgbagwoju anya.
-Na dick, moron.
Ma e nwere ọtụtụ ndị dị ka nke ahụ, ma ọ bụ ya mere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ezighi ezi ma ọ bụ laa azuNa ndị anyị na-etoghị ọkara ma ọ bụ were ya jiri akwụkwọ sịga ga-anụrịrị ee ma ọ bụ ee.
Abụ m spartacus
Anyị niile chọrọ ịbụ Spartacus mgbe. Ya mere, ọ na-agwụ theo, onye ozo bu ozo, onye inverted enyo na Black ma ọ bụ na ụmụ mmadụ tụgharịrị (nke e chere) na nke ahụ egwu na-egbu egbu, ogologo anụ ahụ nke nna ukwu na-emekarị. Ma na njedebe ọ na-enupụ isi, na-abọ ọbọ, na-ahapụ onwe ya ma na-achịkwa ibi ndụ na ịnụ ụtọ, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị ruo na njedebe, nke nnwere onwe na nke kachasị emetụ n'ahụ. Dị ka ihe karịrị otu onye n'ime anyị ga-achọ ime na ndụ. Ma ọ bụ mee ka ụmụ mmadụ nweta ikpe ziri ezi.
Maka ụmụ mmadụ, maka nkịta, maka mmadụ niile. Ga-agụ ya. Na-enweghị mgbagwoju anya, na-enweghị ọkara otu, ọbara, anya mmiri, iru uju, ihe mgbu, mana yana olile anya, ọchị, ịdị nro, nsọpụrụ na ịhụnanya. Mana naanị anyị bụ ndị nwere nkịta ma nwee ha n'oge ndụ anyị niile ga-enwe ekele maka akwụkwọ a magburu onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Nkịta siri ike anaghị agba egwu. Nnukwu nkịta dị ndụ nke Arturo Pérez-Reverte
Akaụntụ kacha dee akwụkwọ na Instagram
"Akwụkwọ akụkọ ọkụ." Ihe omuma ihe omuma nke n’enye Japan aka.